ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာ ချစ်သူရှိတယ်…. ဆိုရင် – ADS Myanmar Blog
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာ ချစ်သူရှိတယ်…. ဆိုရင်
အခုတလော Online မှာ လူငယ်တွေကြာမှာ တော်တော် ခေတ်စားလာတဲ့ စကားလုံးလေးက “Crush” ဆိုတဲ့စကားလုံး လေးပါ…..
Crush ဆိုတဲ့ အသံလေးကြားလိုက်တာနဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို စိတ်ထဲက တိုးတိုးလေးခေါ်မိနေတတ်မှာ ပါဘဲ….
ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ Cursh လေးက ကိုယ့်ကိုပြန်စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုရင်လဲ အတိုင်းမသိပျော်ရွှင်တတ်ကြပါတယ်….
ဒါပေမယ့် ကံတရားနဲ့ ဖူးစာဆိုတာ အင်မတန်ဆန်းကြယ်တဲ့ အရာပါ……
ကိုယ့်ရဲ့ Crush ဆီမှာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်ရှိနေရင်……. အခြားတစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတာကိုမြင်လိုက် ရင်…..
ကဲ ….. ဒီလိုအခြေနေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ….. ရင်ဆိုင်မလဲ…….
(၁) စိတ်ကိုငြိမ်အောင်လုပ်ပါ….. ကိုယ့် Crush ကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ တွဲသွားတာမြင်လိုက်ရင် အနည်းနဲ့အများ တော့စိတ်ထိခိုက်ကြရမှာပါ…. ဒါကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းပြီး တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါ…..
(၂) သူတို့ကို မမြင်နိုင်တဲ့ တစ်နေရာရာကို ခဏဘဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်သွားလိုက်ပါ… စိတ်သက်သာရာ ရစေပါတယ်….
(၃) ပုံမှန်နေရာကိုပြန်သွားပါ…. ကိုယ်ဟာ ခုနက သူတို့အတူတူရှိနေတယ်ဆိုရင် စိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပြန်သွားလိုက်ပါ….ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ တိုက်တွန်းချက်မှမပါဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်းလုပ်ခြင်းသာဖြစ်ပါစေ…. အခုလိုမျိုး အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်ပြန်သွားတာက ကိုယ့်ရဲ့imageကို ထိန်းသိမ်းရာလဲ ရောက်ပါတယ်။
(၄) ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ….. ကိုယ်ဆက်ကြိုးစားမှာလား….နောက်ဆုတ်မှာလား တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ…..ဆက်ကြိုးစားမယ် ဆိုရင် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားနေတာကို သူသိအောင်လုပ်ပါ…. သဲလွန်စပေးပါ….. ( မျက်လုံးအကြည့်ခဏခဏဆုံပေးတာ…. ဂရုစိုက်ပေးတာ စသဖြင့်ပေါ့ ) … သူငယ်ချင်းအဖြစ်ဆက်နေပါ….နောက်ဆုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အကြောင်းကို နောက်ထပ်မတွေးမိအောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ထိန်းပါ….
(၅) ဘယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲချချ ဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်နဲ့ ရလဒ်ကိုကြိုတွက်ထားပါ……
(၆) ဆက်ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်လဲ သူ့တစ်ယောက်ထဲအတွက်နဲ့ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အချိန်တွေကို အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ လက်တွေ့ဆန်ပါ….ဘဝမှာ Crush ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
(၇) သတိပြုရမယ့်အချက် ကတော့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူမဟုတ်တဲ့ အခြားသူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်… သူမှမဟုတ်ရင်ဒီတစ်သက် ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့တောင်ခံစားသွားရနိုင်ပါတယ်…. ဒါပေမယ့် စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ကြည့်ပါ……
(၈) လုံးဝ မေ့မထားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ တစ်ဖန်ပြန်လည်ချစ်တတ်ဖို့ ပါပဲ….လူတိုင်းဟာအချစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင်ထိခိုက်မှုလေးတွေတော့ရှိတတ်ကြပါတယ်….. ဒါကိုကြောက်ပြီး ဆက်ချစ်ဖို့ဝန်လေးနေမယ်ဆိုရင် အထီးကျန်ပိုဆန်လာပါလိမ့်မယ်… ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်နှလုံးသားတံခါးကို အမြဲဖွင့်တတ်ထားပါ…..
လူတိုင်းသာယာပျော်ရွှင်တဲ့ relationship ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး နှလုံးသားတွေ နွေးထွေးနိုင်ပါစေလို့ ads.com.mm က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်…..
ကွှနတြောခြစွတြဲ့သူမှာ ခစွသြူရှိတယြ…. ဆိုရငြ
အခုတလော Online မှာ လူငယတြှကှောမှာ တောတြော ခတစြေားလာတဲ့ စကားလုံးလေးက “Crush” ဆိုတဲ့စကားလုံး လေးပါ…..
Crush ဆိုတဲ့ အသံလေးကှားလိုကတြာနဲ့ တစစြုံတစယြောကရြဲ့ နာမညကြို စိတထြဲက တိုးတိုးလေးခေါမြိနတတေမြှာ ပါဘဲ….
ကိုယစြိတဝြငစြားနတေဲ့ Cursh လေးက ကိုယြ့ကိုပှနစြိတဝြငစြားမယဆြိုရငလြဲ အတိုငြးမသိပွောရြှငတြတကြှပါတယြ….
ဒါပမယြေ့ ကံတရားနဲ့ ဖူးစာဆိုတာ အငမြတနဆြနြးကှယတြဲ့ အရာပါ……
ကိုယြ့ရဲ့ Crush ဆီမှာ ကိုယမြဟုတတြဲ့ အခှားတစယြောကရြှိနရငြေ……. အခှားတစယြောကနြဲ့တှဲနတောကိုမှငလြိုကြ ရငြ…..
ကဲ ….. ဒီလိုအခှနကေေို ဘယလြိုကွောဖြှတမြလဲ….. ရငဆြိုငမြလဲ…….
(၁) စိတကြိုငှိမအြောငလြုပပြါ….. ကိုယြ့ Crush ကို တစခြှားသူတစယြောကနြဲ့ တှဲသှားတာမှငလြိုကရြငြ အနညြးနဲ့အမွား တော့စိတထြိခိုကကြှရမှာပါ…. ဒါကှောငြ့ ကိုယြ့စိတကြို ထိနြးပှီး တညငြှိမအြောငလြုပပြါ…..
(၂) သူတို့ကို မမှငနြိုငတြဲ့ တစနြရောရာကို ခဏဘဲဖှစဖြှစထြှကသြှားလိုကပြါ… စိတသြကသြာရာ ရစပေါတယြ….
(၃) ပုံမှနနြရောကိုပှနသြှားပါ…. ကိုယဟြာ ခုနက သူတို့အတူတူရှိနတယေဆြိုရငြ စိတတြညငြှိမသြှားတဲ့အခွိနမြှာ ပှနသြှားလိုကပြါ….ဒီလိုမွိုးလုပတြဲ့နရောမှာဘယသြူတစြဦးတစယြောကရြဲ့ တိုကတြှနြးခကွမြှမပါဘဲ ကိုယြ့ရဲ့ဆုံးဖှတခြကြွ အတိုငြးလုပခြှငြးသာဖှစပြါစေ…. အခုလိုမွိုး အံဝငခြှငကြဖွှစအြောငပြှနသြှားတာက ကိုယြ့ရဲ့imageကို ထိနြးသိမြးရာလဲ ရောကပြါတယြ။
(၄) ဆုံးဖှတခြကွခြပွါ….. ကိုယဆြကကြှိုးစားမှာလား….နောကဆြုတမြှာလား တစခြုခုကိုရှေးခယွပြါ…..ဆကကြှိုးစားမယြ ဆိုရငြ ကိုယစြိတဝြငစြားနတောကို သူသိအောငလြုပပြါ…. သဲလှနစြပေးပါ….. ( မကွလြုံးအကှညြ့ခဏခဏဆုံပေးတာ…. ဂရုစိုကပြေးတာ စသဖှငြ့ပေါ့ ) … သူငယခြငြွးအဖှစဆြကနြပေါ….နောကဆြုတတြော့မယဆြိုရငတြော့ သူ့အကှောငြးကို နောကထြပမြတှေးမိအောငြ ကိုယြ့စိတကြို ကိုယထြိနြးပါ….
(၅) ဘယဆြုံးဖှတခြကွကြိုပဲခခွ ဖှစလြာမယြ့အကွိုးဆကနြဲ့ ရလဒကြိုကှိုတှကထြားပါ……
(၆) ဆကကြှိုးစားမယလြို့ဆုံးဖှတလြိုကရြငလြဲ သူ့တစယြောကထြဲအတှကနြဲ့ ကိုယြ့ဘဝရဲ့ အခွိနတြှကေို အဆုံးရှုံးမခံပါနဲ့။ လကတြှဆေ့နပြါ….ဘဝမှာ Crush ထကအြရေးကှီးတဲ့အရာတှအမွေားကှီးတယဆြိုတာမမပေ့ါနဲ့။
(၇) သတိပှုရမယြ့အခကြွ ကတော့ မိနြးကလေးပဲ ဖှစဖြှစြ ယောကငျြွားလေးပဲဖှစဖြှစြ သူမဟုတတြဲ့ အခှားသူတှေ အမွားကှီး ရှိပါတယြ… သူမှမဟုတရြငဒြီတစသြကြ ဘယသြူ့ကိုမှ မခစွနြိုငတြော့ဘူးလို့တောငခြံစားသှားရနိုငပြါတယြ…. ဒါပမယြေ့ စိတရြှညရြှညနြဲ့ စောငြ့ကှညြ့ပါ……
(၈) လုံးဝ မမေ့ထားသငြ့တဲ့ အခကွတြစခြကွကြတော့ တစဖြနပြှနလြညခြစွတြတဖြို့ ပါပဲ….လူတိုငြးဟာအခစွနြဲ့ ပတသြကရြငထြိခိုကမြှုလေးတှတေော့ရှိတတကြှပါတယြ….. ဒါကိုကှောကပြှီး ဆကခြစွဖြို့ဝနလြေးနမယေဆြိုရငြ အထီးကနွပြိုဆနလြာပါလိမြ့မယြ… ဒါကှောငြ့မို့ ကိုယြ့နှလုံးသားတံခါးကို အမှဲဖှငြ့တတထြားပါ…..
လူတိုငြးသာယာပွောရြှငတြဲ့ relationship ကိုပိုငဆြိုငပြှီး နှလုံးသားတှေ နှေးထှေးနိုငပြါစလေို့ ads.com.mm က ဆုတောငြးပေးလိုကပြါတယြ…..
Author hsulattPosted on January 26, 2016 January 26, 2016 Categories Lifestyle, OtherTags ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူမှာ ချစ်သူရှိတယ်…. ဆိုရင်
Previous Previous post: Single Ladies တွေ Valentine Day ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲ
Next Next post: တစ်လအတွင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်မလဲ……